Xafiiska Seattle ee Horumarinta Dhaqaalaha waxa uu iskaashi la samaynayaa Shabakadda Ganacsiga Wanaagsan ee Seattle iyo Shunpike si ay iskugu xiraan qaybaha hore ee dukaamada iyo qalabyada farshaxanka ee ka yimaada dadka madow, kuwa asaliga maraykanka ah, iyo ganacsatada kale iyo farshaxanada midabka leh. Mashruucyadani waxay anfaci dontaa xaafadaha, ganacsiyada yaryar, fanaaniinta iyo mulkiilayaasha guryaha iyaga oo abuuraya muuqaalo firfircoon oo soo jiidasho leh oo ku dhiirigeliya dadweynaha inay booqdaan bartamaha magaalada ee Seattle, oo ay taageeraan ganacsiyada maxaliga ah iyo fanaaniinta guud ahaan. Barnaamijkan waxaa maalgeliyay Sanduuqa Soo kabashada Maaliyadeed ee Maxalliga ah ee Coronavirus (CLFR). Taas oo ka tirsanaa sharicigii American Rescue Plan.
Qaybaha hore ee dukaamada Seattle waxay furnaan doonaan December 2021 ilaa Abriil 2022, iyadoo bixinayso hawlqabadyo gaaban oo socon doona afar bilood ama wax la mid ah. Ma jiro wax kharash ah oo laga rabo barnaamijkuna wuxuu ku siin doonaa $ 2,500 oo raasumaalka shaqada ah mid kasta oo ka qaybqaata ganacsi iyo farshaxan.
Codsiyada Seattle Restored waxay xidhmeen Janaayo 17, 2022.
Codsiga Mulkiilaha iyo Maareeyaha Guryaha
Codsiga Ganacsiga Yaryar iyo Farshaxanka
Codsadayaasha waxaa la ogeysiin doonaa Febraayo 25, 2022. Wixii macluumaad dheeraad ah, oo ku saabsan u-qalmitaanka, iyo shuruudaha Seattle Restored, fadlan booqo www.SeattleRestored.org.
Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha ee Seattle waxaa ka go'an inuu dhiso dhaqaale loo wada siman yahay kaas oo faa'ido u leh magaalada oo dhan isagoo kor u qaadaya helitaanka fursadaha dhaqaale ee dhammaan bulshooyinka kala duwan ee Seattle. Qiimaha Ganacsiga (Commercial Affordability) iyo Kooxaha Ganacsiga Xaafadaha (Neighborhood Business District) waxay caawiyaan bulshooyinka si ay u hormaraan oo ay u dhistaan adkeysi iyagoo kaashanaya shuraakada xaafadda, ganacsiga yar yar iyo hal-abuurka si loo kobciyo hantida iyo kobaca bulshada.
Wixii su'aalo dheeraad ah, ama caawimaad ku saabsan luuqada, farsamaha guud, hoyga naafada, agabka qaabab kale ama qaabka lagu cawinkaro dadka curyaanka ah, fadlan kala xidhiidh Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha Seattle (206) 684-8090 ama oed@seattle.gov.